Mpanamboatra sy mpamatsy ny faritra masinina - Orinasa mitrandraka masinina any Sina
Takelaka vy manapaka
Torolàlana avo lenta amin'ny kodia Us ...
Famindrana avo lenta ...
Fiarovan-tsarimihetsika avo lenta ...
Hot Sale S Head freins Camsh ...
Manapaka vy avo lenta ...
Kodiarana torolàlana avo lenta ampiasaina amin'ny milina fanamboarana vita mialoha
Ny kodiarana mpitari-dalanadia ampahany manan-danja ampiasaina amin'ny milina fananganana fiangonana. Amin'ny tsipika famokarana, dia ampiasaina amin'ny fitaterana sy ny fanohanana ny latabatra die. Ny fomba fametrahana ny kodiarana mandeha an-tany dia tokony hotapahina arakaraka ny toe-javatra eo amin'ilay tranonkala - mampiditra vy H na mametraka ny tabilao fampirantiana.
Flange fanoratana kalitao avo lenta
Flange fantatra amin'ny anarana hoe Flange Flange plate. Flange dia zana-kazo sy zoro mifandray, ampiasaina amin'ny fifandraisana eo amin'ny faran'ny fantsona; Ilaina ihany koa ho an'ny flange amin'ny fidirana sy ny fivoahan'ny fitaovana ho an'ny fifandraisana misy eo amin'ny fitaovana roa.
Fitaovana fanamafisam-peo avo lenta ho an'ny faritra misy ny milina sy ny fiara
Fitaovana dia manondro ny fitaovana amin'ny sisin'ny fandefasana meshing mitohy ny fivezivezena sy ny herin'ny singa mekanika, amin'ny alàlan'ny nify, ny làlan-nify, ny tarehy farany, ny tarehy mahazatra, ny faribolana ambony nify, ny faritry ny nify, ny boriborintany, ny boriborintany ary ny hafa faritra, dia be mpampiasa amin'ny fampitana mekanika sy ny tontolo mekanika iray manontolo.
Ny andraikitry ny fitaovana dia ny mampita ny herinaratra, afaka mamindra ny fihodinan'ny zana-kazo mankany amin'ny hazo hafa izy, ny fitambarana fitaovam-piadiana samihafa dia afaka mitana andraikitra hafa, afaka mahatsapa ny fihenan'ny mekanika, ny fitomboana, ny fanovana ny lalana ary ny famerenana ny hetsika, ny fitaovana mekanika matetika tsy afa-misaraka amin'ny fitaovana.
Misy karazan-giratra maro karazana. Araka ny fanasokajiana ny vatan-kazo dia azo zaraina ho karazany telo izy: fitaovam-piadiana mifanila, vodin-kazo mifampitohitohy ary fiorenan'ny tohotra mihombo. Anisan'izany ny fitaovan'ny vatan-kazo mifanitsy ary koa ny fitaovam-pandrehitra, ny vodi-tanety, ny kojako anatiny, ny fonosana ary ny fonosana helika, sns. fitaovana, kankana kankana, fitaovana hypoid sns.
ADDRESSXusheng Village, Biraon'ny Distrikan'i Shuangshan, Zhangqiu, Jinan, Shandong, Sina